Diarin’ny COVID-19 avy any Wuhan: Rehefa lasa fanangonam-baovaon’olom-pirenena ny diary · Global Voices teny Malagasy
Hitan'ireo olon-tsotra manoratra gazety avy eny andohalaharana tany Wuhan fa nakatona ny tranonkalany
Voadika ny 18 Jona 2020 5:32 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, Français, polski, Ελληνικά, русский, Español, ਪੰਜਾਬੀ, Italiano, Filipino, English
Famelan'ny serizy. (Sary avy amin'i ​​Ai Xiaoming. Nahazoana alalana.)
Fahafito ambin'ny folo ary farany amin'ny andian-dahatsoratra diary nosoratan'ilay mpanatontosa sarimihetsika tsy miankina sady manampahaizana feminista Ai Xiaoming sy ilay mpikatroka feminista Guo Jing ity lahatsoratra manaraka ity. Samy mipetraka ao Wuhan izy roa ireo, foibe voalohany nipoiran'ny areti-mifindra COVID-19. Ireto ny rohy mankany amin'ny andian-dahatsoratra voalohany, faharoa, fahatelo, fahaefatra, fahadimy, fahenina, fahafito, fahavalo, fahasivy, fahafolo sy ny fahiraika ambin'ny folo, faharoa ambin'ny folo , fahatelo ambin'ny folo, fahefatra ambin'ny folo, fahadimy ambin'ny folo ary fahenina ambin'ny folo.
Zahao ny fitantaran'ny Global Voices manokana ny fiantraikan'ny COVID-19 manerantany.
Ai Xiaoming: Navoaka tao amin'ny Matter News tamin'ny 10 Aprily 2020
Rehefa navoaka ny diary dia nampitain'ny fotoana — samihafa ny andraisana ny dikany amin'ny vanim-potoana samihafa. Rehefa mandeha ny fotoana dia tsy misy lanjany firy ny tsiambaratelo ary lasa sarobidy kokoa ny zavatra niainana manokana sy ny antsipirihany ara-tantara ao amin'ireo diary. Taloha, sarotiny amin'ny tsiambaratelo ny mpanoratra diary satria ny fitazonana ny diary ho tsiambaratelony no nahatonga azy hanoratra an-kahalalahana. Fomba iray hialana amin'ny sivana ataon'ny governemanta sy ny famoretana ara-tsosialy, hialana amin'ny politikan'ny fanehoan-kevitra sy ny fanafihana avy amin'ireo olona voatonona ao amin'ny diary ny tsiambaratelo. Lasa toy ny bibin-tsaonjo miova ho lolo ny diary rehefa mandeha ny fotoana. Afaka mihoatra ny famerana napetraky ny toerana sy ny fotoana izy ireo. Manjavona tsikelikely mankany amin'ny tantara ireo izay afaka manasazy ireo mpanoratra diary saingy mbola mitoetra ary misongadina ny diary.
Mianoka isika amin'ny fahalalahana hanohitra ny fiarahamonina, ny hafa ary ny ampahany amin'ny “fizahozahoantsika” – ny “fitiavantenantsika” izay lazain'i Freud ho ivon'ny dingana mankany amin'ny fitsofohana ao amin'ny fiarahamonina, rehefa manoratra diary. Raha amin'ny fijerin'ny fampahalalam-baovao mahazatra dia tsy tia fiarahamonina, tsy tia fampahalalam-baovao, ary tsy tia fitsipi-pifehezana ny sasany amin'ireo votoatin-dahatsoratra ao amin'ny diarintsika. Izay no zavamisintsika. Rehefa manamafy ny fahatsiarovan-tenany ny mpanoratra, manangana ny fisainany manokana mahaleotena sy ny maha-izy azy ao amin'ny diariny, dia hitan'ny fiarahamonina sy ny firehan-kevitra manjaka ny fahadisoana ao anatin'ny andalan-tsoratra ary ifanandrinany ireo mpanoratra.Izay diary tena izy dia hifangarika amin'ny jadona firehan-kevitra. Avy amin'izany ao anatin'ny vanim-potoana tsirefesimandidy izany, ny fanoratana diary dia tsy azo ihodivirana fa tafalatsaka ao amin'ny faritra mampidi-doza.
Sarotra kokoa ho an'ny mpanoratra ny mitazona ny fiainany manokana sy ny fomba fanoratany manokana rehefa mihamafy hatrany ny sivana. Heverina ho tsy nifanarahana mihitsy ny fanoratana diary. Na dia mifantoka amin'ny zavamisy tsotra amin'ny fiainana andavanandro aza ny diary dia ny tsy fitovian-kevitra ao anatiny izay lavitry ny fitantarana ofisialy lehibe no manaitra.
Raiso ny diarin'i Fang Fang sy Guo Jing ary ireo lahatsoratra hafa mitovy aminy ho ohatra, tahaka ny firaketana an-tsoratra manokana mifangaro amin'ny tatitry ny olon-tsotra no famaky azy noho ny hoe diary manokana.
Izany hoe, nosoratana amin'ny endrika diary ireo lahatsoratra ireo – karazany izay manome fahafahana bebe kokoa amin'ny fandinihana manokana sy ny zava-niainana manokana. Saingy an-takonana ankehitriny ny mpamaky fa tsy ampahibemaso.
Miasa kokoa toy ny tatitra eny ifotony ireo Koa satria mitady fifanakalozan-kevitra amin'ny besinimaro ireo “diary” ireo, dia mirona kokoa ho tatitra avy eny amin'ny lohalaharana izy ireny miohatra amin'ny fifanakalozan-kevitra amin'ny manodidina ny mpanoratra.
Nahoana ireo mpanoratra ireo no nanova ny diariny ho tatitr'olo-tsotra? Rehefa tombantombanantsika ny zava-bitan'ireto diary ireto dia tsy tokony hohadinointsika ny fisian'ny sivana sy ny sorona ataon'ireo mpitati-baovaontsika.
Tsy maintsy miaiky isika raha tsy minia manadino na tsy miraharaha ny tahotra ao amintsika fa amin'ny fotoana izay tena mampidi-doza sy mahasarotra indrindra ny areti-mifindra dia anisan'ireo tena be herim-po ireo mpitati-baovao eny ifotony tany Wuhan – toa an'i Chen Quishi, Li Zehua, Fang Bin, Zhang Zhan, Zhang Yi, sns – izay sahy niditra hopitaly, ny trano fandevenana, ary ny vondrom-piarahamonina tena natahorana hamindra aretina. Tsy natahotra na inona na inona izy ireo.
Tsy manana fahazoan-dàlana ofisialy amin'ny fanaovan-gazety izy ireo ary tsy misy mpiaro raha oharina amin'ny mpanao gazety hafa. Tandindonin-doza ihany koa ny ain'izy ireo sy ny fiarovana azy ireo. Noho ny tatitra nataon'izy ireo dia rentsika ny feo avy amin'ireo olona marefo indrindra ary hitantsika ny famoizam-pon'ireo tsy afa-manoatra. Tao amin'ny tambajotra sosialy, hitantsika ny lahatsary nalaina avy tamin'ny vazantany samihafa tany amin'ny tanàndehibe samihafa ary rentsika ireo olona namoaka ny fihetseham-pony. Tsy tokony hohadinointsika mihitsy fa mpitati-baovao maromaro no noterena hanakombom-bava. Tsy mbola naheno vaovao momba ny niafaran'izy ireo isika na dia taorian'ny nanafoanana ny fihibohana tany Wuhan aza.
Ny firongatry ny endrika diary no tombony azontsika tamin'olon-tsotra nanora-gazety lasa voatampim-bava. Derain'ireo mpamaky ny diary satria tsy mahazo tatitra avy eny amin'ny toerana hitrangan'ny zava-mitranga sy avy eny ifotony ny vahoaka.